Igumbi elipholileyo leSunny
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguWilson Alberto
Indlu enefenitshala epholileyo yokuhlala eyonwabisayo, ebekwe kumbindi wesixeko saseSucre, enobushushu obumnandi kunye nokukhanya kwendalo okuninzi.
Indawo yokuhlala ibandakanya, iWifi yasimahla, amanzi ashushu zombini ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela kunye neshawari, iintsuku ezingama-24/7 ngeveki, iTV yeCable yasimahla, impahla yokuhlamba ngesandla kwithafa, itafile kunye nezitulo kwithafa ukutshisa ilanga kwaye uphumle.
Le ndlu inikezela ngokufanelekileyo ukuhlala okwethutyana kumntu, isibini okanye iqela labahlobo, kwiholide okanye emsebenzini, ibekwe kwi-3 ukuya kwiibhloko ze-6 ukusuka kwi-Main Plaza 25 de Mayo, iMarike ePhakathi, iindawo zokuKhenketha kunye neevenkile ezinkulu. Ihlala kumgangatho wesithathu wesakhiwo kwindawo entle ejikelezwe yimithi, inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala / lokutyela elikhanyisiweyo, amagumbi okulala amabini aneebhedi ezi-2 ½, inendawo enkulu ekwabelwana ngayo apho kukho ipanoramic. umbono wesixeko, kwaye ngamanye amaxesha unokubona iintaka, izikhwenene okanye amaxhalanga xa ebhabha. Onke amagumbi okulala aneengcango ezitshixwayo.
40" TV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Ifriji yeSamsung Frio Seco
Indawo yokuhlala ezolileyo esembindini enemithi emininzi kokusingqongileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Wilson Alberto
Nje ukuba ugcino lwenziwe, unxibelelwano lunokwenziwa ngoqhagamshelwano oluthe ngqo, ngokuthumela umyalezo, nge-imeyile, kunye nendawo echanekileyo yeSebe iya kubonelelwa kwimephu yoMmandla oMbindi weSixeko saseSucre, enkosi kakhulu.